Ha isku dayin! Cunto waxay bixisaa tijaabooyin SEO ah Waa inaad isku daydaa Sannadkan
SEO waa mid ka mid ah hababka ugu caansan uguna xoogan ama xeeladaha si loo kordhiyo muuqaalka ashyaada ee shabakada internetka ee internetka. Waxaa jira waxyaabo, tabo, iyo fikrado aad ku daryeesho. Hal erey oo qeexi kara gawaarida raadinta isbeddelku waa "tijaabo." Waa qasab in la isku dayo ereyada muhiimka ah iyo tijaabinta istiraatiijiyado cusub iyo habab si loo gaaro guusha internetka.
Jason Adler, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semmat , ayaa ka wada hadashay qaar ka mid ah hawlaha SEO ee aad isku dayeyso sanadkan.
aan kuu sheego in tijaabooyinka ay yihiin dhamaan aasaaska tamarta raadinta raadinta iyo damaanad qaadka ah in baabuur badan lagu raaco boggaga internetka - web hosting in windows. Iyadoo aan lahayn tijaabooyinka SEO, waxaa suurtogal ah inaanay suurtogal u aheyn qof kasta inuu ku soo rogo kacdoonada Waddanka Adduunka
Tijaabo 1: Gundhigga Mawduuca
Dhamaan khubarada SEO-yada waxay ogaadaan in content uu yahay boqor. Shaki kuma jiro sababtoo ah, iyada oo aan laheyn tayada tayada, goobtaada kuma fariisan karto internetka. Nasiib darro, dad kala duwan ayaa doorbidaya in ay ka shaqeeyaan nuxurkooda si ay u badbaadiyaan waqtigooda iyo dadaalkooda..Istaraatiijiyadani marnaba kuma siin doonto natiijooyinka la rabay. Taasi waa sababta aad u abuuri laheyd tayada tayada oo aad u isticmaashid ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee maqaalladaada. Dad badan ayaa aaminsan in tani ay macnaheedu tahay in la abuuro maqaalo badan maalin kasta. Dhab ahaantii, waxay macnaheedu tahay in aad qori hal maqaal maalin kasta waana in ay ahaato tayada ugu sareysa. Wakaaladaha ayaa si adag u shaqeeya si ay u helaan content ay qoraan qoraallada sare ee adduunka oo idil. Waxay si caddaalad ah u siiyaan qorayaashooda oo ay siiyaan shaqo badan. Waa inaadan qorin oo keliya qoraalada tayada leh, laakiin sidoo kale tijaabi ereyada muhiimka ah iyo odhaahyada si aad u hesho boggaga ku qoran natiijooyinka mashiinka raadinta. Google wuxuu ka dhibtaa dhammaan boggaga internetka oo ku salaysan tayada macaamiisha iyo guud ahaan maamulka domainkaaga. Haddii aad samaysay bogag badan, waxaa muhiim ah in lagu soo bandhigo maqaalo fiican ama qoraallo internet ah.
Tijaabo 2: Qibrada Isticmaalaha Isticmaalka
Waayo-aragnimadu waxay had iyo goor ku xisaabtamaysaa qayb ka mid ah adduunka aad ku nooshahay. Tixgeli sida fure u ah guusha iyo bixinta martidaada waayo aragnimo aad u fiican. Isku-dubbarid istaraatejiyado kala duwan oo ku jihaysan SEO-gaaga sidii tijaabin aan dhammaad laheyn sidaa daraadeed dad badan ayaa muujinaya xiisaha bogaggaaga. Maaha qalad ah in la yiraahdo algorithms iyo istaraatijiyadaha Google ayaa isbeddelay bilihii la soo dhaafay. Sidaas awgeed, waa inaad si fiican u fahamtaa waxa makiinadaha raadinta raadinayaan iyo sida loo soo bandhigo waayo-aragnimo wanaagsan oo loogu talagalay dadka isticmaala bogga internetka. Inta badan aad fahamsan tahay maskaxdaada booqdayaashaada, waxaa fiican inaad fursadda aad ku hagaajisid oo aad la xiriirto booqdayaasha iyo makiinadaha raadinta gaar ahaan Google.
Tijaabo 3: Xoojinta Xiriirka Gudaha
Khabiir SEO ah wuxuu ogyahay muhiimada uu diiradda saarayo xiriirinta gudaha iyo dibedda. Kordhinta xiriirintaada gudaha ee aad u weyn waa muhiim. Qoraalka ereyada muhiimka ah ama qoraalka aan habooneyn ee loo baahan yahay oo kaliya ayaa lagamaarmaan u ah in laguugu soo celiyo maqaalladaada kala duwan. Taa bedelkeeda, waa in aad soo qaadatid mowduucyo kala duwan oo hubi in tayada aysan wax khasaare ah ku gaari karin kharash kasta. Isku xir dhammaan boggaga ku haboon oo raadso natiijooyin fiican todobaadyo gudahood.